ဘာလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဘာလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲ
ဘာလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲ
Posted by King on Jan 24, 2012 in Arts & Humanities, Myanmar Gazette, Think Different | 25 comments
(ဤပုံအား ကုံလုံဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ပုံတူ ရုပ်ထု ရှိရာ စံကျောင်းတော် အရှေ့မှ ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏)
ဘာကို ဆိုလိုမှန်း သိချင်သိကြလိမ့်မယ်ပေါ့ …… ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခံစားချက်တွေက တူမယ်လူ ရှားမယ်လို့ထင်ပါတယ် … Comment များ ၀င်ရေးတဲ့အခါ မိမိရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကလေးများကို မြင်ချင်မိပါတယ် ..
ကင်းကွာ လွမ်းစွတ် ၊ နေရခက်၏
ဆိုညည်း သောက ဗျာပါဒများ
ပဲပြုတ်ကို သာစား ။
( မမူးကြောင် မရူးကြောင် ဘဲ လျှောက်ရေးသည် )
မောင်ကင်း မင်းဒီအပိုဒ်က အပျိုကြီးတွေကို အခြောက်တိုက် ထိပါးတယ်လို့ ထင်ပါ၏.
ဖူးချိန်တန်ဖူး ပွင့်ချိန်တန်ပွင့် ကြွေချိန်တန်တော့လည်း
ဒါဆို.. ထန်းနဲ့တူသော ယောက်ျားလေးဆိုပီး ရေးပါဦးလားဗျ..။
ကိုပေါက်နော် ……… သူများစောင်းမပြောနဲ့…………… ဟွန့်…..
ဟီး——– မမြဲသောသဘောတွေကိုသိနေပေမဲ့လဲ ပုထုဇင်မို့ လောဘဒေါသမောဟတွေကင်းဖို့တော်တော်ကြိုးစားရမှာပါ။ ပိုစ့်ကလေးအတွက်ကျေးဇူးပါ။ တခါတခါမမြဲသောသဘောတွေကိုသိနေပေမဲ့လဲ တခါတခါတော့လဲမေ့မေ့နေမိတယ်။ သတိပေးလို့ကျေးကျေးပါ။
ကိုကင်းပြောသလို လုံ့ လရှိကြပါစို့ လေ။
အစ်မ အေး စကား ကိုသာ ရာနှုန်းပြည့်ထောက်ခံ လိုက်ပါတယ်။
ခူးပြီးနွမ်း သွားရင် အမှိုက်ပုံး ထဲ ရောက်မည်။
အခူးမခံ ရဘဲ ဒီအတိုင်း နွမ်းရင် မြေမှာဘဲ မြေဩဇာ ပြန်ဖြစ်မည်။ အကျိုးရှိ၏။
ကြည့်ရတာ သူကြီး ရဲ့ မြန်မာပြည် လူသန်း ၁၀၀ စီမံကိန်း အတွက် မဲဆွယ်တာထင်ရဲ့။
ညီမငယ် များ၊ တူမငယ်များ နားမယောင်ကြနှင့်။ ;-)
သူကြီး က ဒီလို ကဗျာစပ်လဲ ဖြစ်တာဘဲကိုး … ;-)
အယ် … သူကြီးလည်း ကဗျာစပ်တယ်လား ။ တခါတလေများ သူကြီးရဲ့ ရသ ရင်တွင်းဖြစ်လေးတွေလည်း ဖတ်ကြည့်ချင်တယ်။ ကဗျာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အတိုအထွာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်။
အင်း.. သူကြီး ပြောသလို ဥပဒေ ထုတ်ပြီးရင် မက်လုံးအနေနဲ့ အ်ိမ်တလုံးနဲ့ ငွေပါ ချေးမယ်ဆိုရင်တာ့ ယူကြမယ်ထင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ လူဦးရေ ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်း အခြေခံလူတန်းစားများက ခပ်ငယ်ငယ်ထဲက အိမ်ထောင်ပြုဖြစ်ကြတယ်။ ကလေးကိုလည်း တော်တော်များများ မွေးလိုက်တယ် ။ သိပ်လည်း မစဉ်းစားကြဘူး။ ကြုံသလိုနေ ကြုံသလိုတွေး ပျော်သလိုပဲ နေကြတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အခြေခံလူတန်းစားတွေက တဖြည်းဖြည်းများလာတယ်။
လူလတ်တန်းစား ( ပညာတတ်အများစုပါတယ်) တွေကတော့ ဘာပဲလုပ်လုပ် စီမံကိန်းလေးတွေနဲ့ စဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ကြတယ်။ ကလေးဆိုလည်း ကိုယ်တာဝန်ယူနိုင်တာကို စဉ်းစားပြီး ၂ ယောက် ၃ ယောက်အလွန်ဆုံးယူကြတယ်။ အပျိုကြီး လူပျိုကြီး အများစုက ဒီအတန်းအစားထဲမှာ ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ ဒီလူတွေကို မက်လုံးပေးမှဖြစ်မှာ သူကြီး ဥပဒေနဲ့ တော့ရမယ် မထင်ဘူး။
သူကြီးပြောသလို ဟိုက ဒီက လူတွေ ၀င်လာပြီး ကိုယ့်လူမျိုးတွေ မျက်နှာ ငယ်ရမှာလည်း ကြောက်တယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် စင်ကာပူက ” အမေးဘွဲ့လွန်ကျောင်းသူ အဖြေလီကွမ်ယု “ဆိုပြီး ဆောင်းပါးလေးဖတ်ဖူးတယ် weekly eleven ထဲမှာ ။ စင်ကာပူ နိုင်ငံသား ကျောင်းသူက သူတို့နိုင်ငံထဲ ကို နိုင်ငံခြားသားတွေ နေရာယူလာတာကို ဝေဖန်တော့ လီကွမ်ယုက အခု ညည်းမှာ ရည်းစားရှိပြီလား အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စိတ်ကူးရှိပြီလားလို့ မေးတယ် ။ ဟိုက မဖြေနိုင်တော့ ညည်းတို့လို လူတွေ အိမ်ထောင်ပြု ကလေးယူရင် အပြင်က လူတွေ ငါတို့ အထဲသွင်းစရာမလို ဘူးလို့ ဖြေလိုက်တယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံလည်း အဲ့လို မဖြစ်ချင်ဘူး။ ဒို့အရေးလို့တော့ မအော်ချင်ဘူး ။ သူတို့ အရေးလို့ပဲ အော်ချင်တယ်။
မွေးလာတဲ့ကလေးတွေကို.. ဂရင်းကတ်ပေးထားတဲ့သူတွေရဲ့ တဦးစီဒေါ်လာ၂သိန်းကနေရတဲ့အတိုးနဲ့.. ကလေးအသက်၁၀နှစ်အထိ.. ကျမ်းမာရေး၊ပညာရေးနိုင်ငံတော်ကတာဝန်ယူပေးမယ်..။
မမွေးချင်ရင်.. နိုင်ငံလက်ထဲအပ်လိုက်.. နိုင်ငံက မွေးပေးမယ်..။
ပိုက်ဆံမရှိဘူးကြေညာတဲ့..မိဘမရှိတဲ့.. အမေရိကန်ကလေးတွေကို.. အသက်၁၉နှစ်အထိ.. ကျမ်းမာရေးအာမခံပေးတယ်.။
မမွေးထားချင်ဘူးပြောတဲ့..မိဘတွေရဲ့ကလေး.. အစိုးရကသိမ်းသွားပြီး.. မွေးချင်တဲ့သူကို တလ၅၀၀-၈၀၀ စသဖြင့်ပေးပြီး.. မွေးစားခိုင်းတယ်..။
သများတို့ ထန်းသီးတွေကော ဘယ်နိုင်ငံကို မှန်းပြီး လစ်ရမလဲဂျ
ဒဲ့ ပြောဇမ်းဘာဂျာ ….၀င်္က၀ုတ္တိဒွေ လုပ်မနေပါနဲ့ …
ခု လူဦးရေ သန်း ၅၀ (၆၀မပြောနဲ့နော..ပိုမတွက်တာ စိတ်ချရတယ်..)
မျှော်မှန်းတာ- သန်း ၁၀၀ အင်း …ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့… အရှင်မွေး ..နေ့ချင်းကြီးသတဲ့….
ကြာဘာဒယ်ဂျာ ..တီလုပ်မလေးဒွေ သန်း-၂၀လောက် အင်ပိုထ့် လုပ်လိုက်စမ်းဘာ…
ကိုကြောင်ကြီးနဲ့ ဖားသက်ပြင်း အမြန်ဆုံး ပြန်လာလိမ့်မယ် …
မယုံရင် ကြည့်…. ခိခိ….
မြန်မာပြည်ဖြတ်ပြီး. တရုတ်-အိန္ဒိယ-အာစီယံ-မဲခေါင်ဒေသ နိုင်ငံတွေကုန်သွယ်လိမ့်မယ်…။
ရှေးပရီဝါး..ပို့စ်ဝါးလို.. အိန္ဒိယ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-တရုတ်က အလုပ်သမားတွေလှိမ့်ဝင်လာလိမ့်မယ်..။ လက်ဗလာနဲ့ လာသူတွေများမှာပေါ့..။
ဒီအတွက် လ၀က ဥပဒေတွေပြင်ထားသလား..။
ကျုပ်ကတော့.. လ၀ကဥပဒေကို ယူအက်စ်လို.. ဒေါ်လာငွေ ၂သိန်းပါလာရင်..ဂရင်းကတ်- အမြဲနေခွင့်ပေးတာနဲ့ စစေချင်နေတယ်..။
…. မြန်မာကျား-မ အသက်၂၅ အထက်အိမ်ထောင်မပြုမနေရ ကလေးမယူမနေရ ဥပဒေတွေထုတ်စေချင်နေတယ်..။
လိုက်နာချင်အောင် ဘယ်လိုမက်လုံးလေးတွေ ပေးသင့်တယ်ဆိုတာ
ကိုကင်းရေ.ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကို ကိုယ်ပြန်သနားမိပါတယ်.
သဘာဝဟာ သဘာဝပါ ဘဘကင်းရယ် သင်္ခါရကို ဘယ်သူမှလွန်ဆန်လို့မရပါဘူး
အချင်းချင်းမို့ပြောရဦးမယ် တဂ်ထည့်ထားတာ သတ်ပုံမှားနေတယ်
မြန်မြန်နွမ်းလျ ..စောစော ကြွ …
သြော် .. ပန်းနဲ့နှိုင်းတဲ့ ခေတ်ရဲ့ အငွေ့သက်ကလည်း ကျန်သေးပါလားနော် …
နောက်မျိုးဆက်သုံးခုစာလောက်ဆိုလျှင်တော့ …. ဘာနဲ့များနှိုင်းကြမလဲ .. ရင်မောရင်း သိချင်မိတယ် … ။
ကြောင် တွေ တယ်များပါ့လား
ကြောင် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ခဏခဏ မပြောနဲ့ဗျာ
ဦးကြောင်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က တရုတ်မလေးတွေကို လုဖော်လုဖက်ဗျ …
အဲဒါက အပျိုကြီး အပျိုလေး တွေကို ယူရင်လည်း ရတယ်ဗျ … ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ပေါ့ ကြိုက်သလိုတွေးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ … ကျွန်တော်က ဒိထက်မက ဘုံသုံးလို့ရအောင် တစ်ခြား အတွေးလေးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတာ … …
ကိုပေါက်ကတော့ ထန်းနဲ့တူသော အကြောင်းကို ဆက်ပြီးသွားတော့ ….
@ မ Thel Nu Aye ရေ
ကျွန်တော်လည်း မေ့နေတယ်ဗျ အမှန်က အ၀ိဇ္ဖာ အမှောင်ဖုံးပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားတာဗျ …
@ အတိသဉ္ဇာ နာဂရ ချစ်သူ ရေ
ပြောင်းလဲခိုက်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်တပ်တစ်အားနဲ့ လုံ့လ စိုက်လိုက်ကြစို့ဗျာ …
ပန်းနှင့်တူသောမိန်းကလေးသည်၊ပန်ဆင်ချင်သူပေါများကာ၊ဆွတ်ခူးချွေယူမည့်သူပေါများလှပေ၏။ ဆိုတဲ့ စကားရဲ့နောက်မှာ ဆက်ရန်ကျန်သေးတဲ့ စကားလုံးတွေကို နားလည်မယ်ဆိုရင်ဗျာ …..
အမပြောသလို ဆိုရင် အရမ်းတစ်ဖက်သတ်ဆန်မလားလို့ ….
ပြောမယ့်သာပြောရတာ ယောင်္ကျားလေးတွေက ပန်းကလေးတွေကို မိန်းကလေးတွေထက် ပိုချစ်တတ်သလားလို့ဗျ (ကျွန်တော့်အထင်ပါ)
အငြင်းအခုန်လေးများလည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်ဗျ …
ဖျက် ဖောက် ချုပ် တော့ မလုပ်ခိုင်းနဲ့နော်ဗျ ….
@ pooch ရေ
ဆွေးနွေးခဲ့သလို ကျွန်တော်လည်း တွေးမိပါရဲ့ဗျာ
အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျ …
ဘာလို့ ထန်းသီးခြောက်ကိစ္စလည်း တင်ပြလေဗျာ ..
စီလုတ်မလေးတွေ တင်သွင်းဖို့နေနေသာ သူတို့တောင် တို့ဆီက အ၀ယ်လိုက်ကြမ်းနေတာ
သူ့ဆီက လာတာ မလာတာ အရင်ထား ကိုယ့်ဆီက မထွက်ဖို့ စည်းရိုးလုံအောင်ကာကြစို့ …. လူပျိုတွေ မှာ တာဝန်ရှိတယ်နော် …
အမတ်မင်းအတွက် သူကြီးက စေတနာနဲ့ ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်
အဲဒီအခါမှ “သားမှားပြီ အမေရဲ့”လို့ သီချင်းမဆိုနဲ့နော် …
@ မြေးမလေး မိုးဇက်
ငါ့မြေးက အမြင်စူးရှတယ် …. ဘဘလဲ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ သေချာမကြည့်မိဘဲ ရိုက်လိုက်မိလို့ပါကွယ် …
ဒီအချက်နဲ့တင် မြေးမလေးကို လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာ သုံးဖို့ ဘဘ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီကွယ်
(မှတ်ချက်။ ဘဘ အိမ်ထောင်ပြု ကလေးရရင် ကလေးထိန်းခိုင်းရမယ်) …
@ Ju Ju ma
ဒါကတော့ ခူးယူတဲ့သူ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်ဗျ
ဥပမာ ပန်းတစ်ပွင့် ဆိုပါတော့
တစ်ချို့က ဘုရားတင်ဖို့ ခူးတယ်
တစ်ချို့က ဈေးမှာရောင်းဖို့ ခူးတယ်
တစ်ချို့က ပန်းအိုးမှာ အလှထိုးဖို့ခူးတယ်
တစ်ချို့က ပန်ဆင်ဖို့ ခူးတယ်
@ မ etone
အသစ်တွေ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အဟောင်းနား တ၀ဲလယ်လယ် ဖြစ်နေအုံးမှာပဲဗျာ
အားလုံးကို အစဉ် လေးစားချင်ခင်လျှက်
ဘဘကင်း အရီးလတ်အစားဝင်ငြင်းမလို့ စဉ်းစားပေမယ့်
မိုးစက်ရဲ့ကျောင်းကို လာပို့လေ ၀င်ကြေးတစ်ဝက်ပဲယူမယ်
အဲသည့်ပန်းကို မရည်ညွှန်းလိုပါ . .ကိုကင်းရယ်…….
ဆရာမ မခင်စောမူရဲ့( လိပ်ပြာနဲ့ကြာကုမုဒ် ) ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး
အဲဒီကဗျာလေးအကြောင်း အလျှင်းသင့်ရင် ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ…..